कार किन्दै हुनुहुन्छ ? एक पटक ‘डिजायर जेडएक्सआइ’ खोज्नुहोस | नेपाल आज
शुक्रबार, ०३ मङि्सर २०७८ गते मा प्रकाशित
सामान्यतया धेरै जसो मानिसको सपना हुन्छ– आकर्षक र सुन्दर कार खरिद गर्नु । आफ्नै गाडीमा हुइँकिन पाउँदाको मज्जा कसलाई मन नपर्ला ?
तर, कार किन्ने समयमा प्राय धेरैलाई अन्योल हुन्छ– कुन किन्ने र कस्तो किन्ने ? कतिपयलाई त कारको ब्रान्ड र मोडलको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले कार किन्दा पैसामा भन्दा पनि कारको फिचरमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।
यस्तो छ, सुजुकीको ‘डिजायर जेडएक्सआइ’
कार किन्दा केही मूलभुत कुराहरुमा ध्यान पु¥याएन भने भविष्यमा पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि आउँन सक्छ । त्यसैले आज हामीले मारुती सुजुकीले भर्खरै वजारमा ल्याएको ‘डिजायर जेडएक्सआइ’ को वारेमा चर्चा गर्दैछौ।
मारुती सुजुकी नेपालको आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटोकर्पले केही समय अगाडि कारको नयाँ ब्रान्ड ‘डिजायर जेड एक्स आइ’ नेपालमा भित्र्याएको हो। यो कार विशेष गरी युवा पुस्ताका साथै लक्जरियस कारको सौखीनहरुका लागि डिजाईन गरिएको छ।
हेर्दै फेन्सी, चलाउँदा आरामदायी
यो कारण निकै आर्कषक र फेन्सी देखिन्छ । कम्प्याक्ट सेडान मोडलमा रहेको यो कारको फ्रन्ट तथा ब्याक लुक्स निकै अर्कषक छ । यसमा नयाँ बम्पर र ग्रिल डिजाइनसहितको बोल्ड र स्टाइलिस फ्रन्ट फेसिया र आधुनिक वुड फिनिस इन्टेरियर छ ।
यो कारमा ३७८ लिटरको फराकिलो बुथ स्पेस छ। जसलाई रिमोट कन्ट्रोल सिस्टमवाट खोल्न सकिन्छ। अर्को महत्वपृर्ण कुरा यो कार कि लेस छ। ढोकामा रहेको स्मार्ट इन्ट्री बटनलाई थिचेर कार लक तथा अनलक गर्न सकिन्छ ।
कारका सिटहरु लामा र फराकिला छन् । अग्ला र वजनदार मानिसहरुका लागि समेत निकै आरामदावयी बनाइएको छ–सिटहरुलाई। साथै स्टेरियङ्ग, क्लज, ब्रेक, एक्सीलेटर, ह्यान्डब्रेक र स्टेरियङ्गको ग्रिप एकदमै स्मुथ, इजी, स्र्पाेटी छन् । स्टेरियङ्गलाई लेदर ¥याप गरिएको छ भने हाइट एडजस्ट गर्न मिल्ने गरी स्टेरियङ्गको डिजाईन गरिएको छ ।
ब्याक सिटमा पनि एसी
फ्रन्ट तथा ब्याक सिटको हेड रुम, लेग रुम स्पेसियस छन् । वजनदार मानिसहरुका लागि पनि यो कार उपयुक्त छ । ब्याक सिटमा आर्म रेष्ट र हेड रेष्ट पनि छ। आर्म रेष्टलाई कप होल्डरका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्याक सिट ३ जनाका लागि डिजाइन गरिएको छ भने एसी पनि उपलब्ध छ ।
कच्चि सडकमा पनि उपयुक्त
कारको फ्रन्ट तथा ब्याक मिरर भ्यु कम्र्फटेबल छ । डिजायर जेडएक्सआई काठमाडौं उपत्यका लगायत नेपाल अधिराज्य भरीका सडककोे लागि उपयुक्त छ । हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको यो कार नेपालका ग्रामिण भेगका कच्ची सडकमा समेत सहज रुपमा चलाउन सकिन्छ। यसमा १६३ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स क्षमता छ ।
पार्किङका लागि समेत सो कार सजिलो छ । यसको पावर पिकअप र इन्जिन क्षमता पनि उत्कृष्ट छ । डिजायरमा आईएसएस फङ्सनसहितको नेक्स्ट जेन के सिरिज डुवल भीभीटी बीएस ६ इन्जिन राखिएको छ । उच्च कम्प्रेशन रेसियो, कुल्ड भन्ज सिस्टम र पिस्टन कुलिङ जेड भएको नयाँ इन्जिन राखिएको छ । जुन पहिलेको भन्दा परिस्कृत छ ।
कारको इन्जिन कार्यक्षमता बढाउन घर्षणलाई पनि कम गर्दछ । कम्पनिका अनुसार यो इन्जिनले ६ हजार आरपीएममा अधिकतम ६६ किलोवाट पावर उत्पन्न गर्दछ । उकालो, ओरालो सबै खाले सडकका लागि यो गाडी उपयुक्त छ ।
यो कार रायडिङ्ग कम्र्फटेबल छ भने यसको स्पिड पनि उत्कृष्ट छ। हाई स्पिडमा पनि यो कार स्टेबल छ । कार लेस साउन्ड र पिसफुल छ ।
सुरक्षामा नो कम्परमाईजः डुवल एयरब्याग, एन्टिलक ब्रेकीङ सिस्टम
सुरक्षामा हिसाबमा पनि यो कार अत्यन्तै उपयुक्त रहेको छ । यसमा डुवल एयरब्याग, एन्टिलक ब्रेकीङ सिस्टम, स्पिड अलर्ट, सिटबेल्ट प्रिटेन्सनल, ब्याक गियर सेन्सर जस्ता सुविधाहरु रहेका छन् । फ्रन्टका दुबै सिटमा बस्नेले सिट बेल्ट अनिर्वाय लगाउनु पर्ने छ । सिट बेल्ट नलगाउँदा अटोमेटीक साइरन बज्दछ ।
गाडीमा थप सुविधामा लागि अटो एसी सिस्टम, आइडियल स्टार्ट र स्टप, अटो हेडल्याम्प, अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, सेन्ट्रल लकिङ जस्ता फिचर रहेका छन । एसको ड्यास बोर्ड तथा गोल्भ बक्स समेत उत्कृष्ट छ। म्युजिक साउन्ड सिस्टम पनि उत्कृष्ट छ । एन्ड्रोइड र आइफोन दुबै प्रकारका फोनको प्रयोग गर्न सकिने यस कारमा म्यापको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालमा सुजुकी डिजाएर जेडएक्सआइको मुल्य ३९ लाख ९ हजार रहेको छ । यो कारले प्रति लिटर इन्धनमा २३ किलोमिटरसम्म माइलेज दिने कम्पनीको दाबी छ । यसको टायरको ग्रिप पनि बेस्ट छ ।